GSSC is an anti-counterfeiting technology company that provides state-of-the-art document security and brand protection solutions. GSSC takhasusay horumarinta xal caadadii loogu talo galay in muuqan haboon aad design iyo ammaanka kaabayaasha hadda jira.
Kelmadaha indhaha Advanced, iyo sidoo kale fudud-ku-kaalinta smartphone caddeeynta, qaar ka mid ah sababaha ay muuqaalada GSSC waxaa loo isticmaalaa on balaayiin waxyaabaha brand iyo waraaqaha dunida oo dhan. GSSC Arzaaqay technology ammaanka tiga in dowladda idman shirkadaha daabacaadda ammaanka iyo shirkadaha waaweyn ee ka badan 40 sano.
Alfred V. Alasia, our aasaasaha iyo hindisa xiranayo habka Indicia® custards ah bartamihii 70 iyo waaso ganacsiyaynya of technology this ee ammaanka document iyo sugida alaabta. Tan iyo markaas, Hawlo baaritaan ballaaran GSSC ayaa keentay in soo saarka badan oo cusub iyo shatiyada kuwaas oo kaliya xoojiyey meel shirkadda ee waqti dheer sida hogaamiyaha warshadda duurka ammaanka daabaco.